Hiran State - News: HS:-Wasiirka warfaafinta Hiiraan State oo soodhaweeyey guusha ay gaareen ciidmada reer Hiiraan
HS:-Wasiirka warfaafinta Hiiraan State oo soodhaweeyey guusha ay gaareen ciidmada reer Hiiraan
HS:-Wasiirka warfaafinta Hiiraan State oo soodhaweeyey guusha ay gaareen ciidamada reer Hiiraan baaqna u diray shacabka Hiiraan meelkasta oo ay joogaan.
Wasiirka wasaarada warfaafinta dowlad goboleedka Hiiraan State Amb Abdullqadir Abdulle Hooshow ayaa ku tilmaamay guusha ay gaareen ciidamada reer Hiiraan mid taaariikhi ah isagoona shacabka Hiiraan kula taliyey dhawr qodob oo muhiim u ah bulshada Hiiraan iyo dhamaanba umada Soomaaliyeed.
Amb Hooshoow ayaa ku booriyey waxgaradka, aqoonyahanada, culimadudiinka, ganacsatada,
siyaasiyiinta reer Hiiraan meelkasta oo ay joogan iney ku dadalaan sidii loo sugi lahaa nabadgalyada guud ee Hiiraan iyadoo laga faa'ideysanayo dhibaatadii shacabka ka soo gaartay kooxahan argagixisada ah oo mudo dheer ku sugnaa magaalada Belet Weyn.
Reer Hiiraan dhamaantood waa isku wada dan waana lama huraan in xaalada guud ee Hiiraan laga eego dhinaca horumarka oo aysan ciidamadu ku dhaqaaqin wax aargoosi ah iyagoo bartilmaameedsanayo shaqsiyaad gaar ah, si taasi aysan u dhicina waa in la helo nidaam iyo kala danbeyn ka hana qaada guud ahaan dhulka Hiiraan maadama hada laga gudbay xiligii fowdada.
Amb Hooshoow ayaa sidoo kale ugu baaqay beesha caalamka iney la gaaraan gar gaar deg deg ah shacabka Hiiraan iyadoo la isticmaalayo dhinaca hawada maadaama uu hada xor yahay garoonka diyaaradaha Ugaas Khalif isagoo si gaar ah baaqaan ugu diraya hayaddaha gar gaar oo in mudo ah laga hor istaagay howlahoodii shaqo.
Ciidamada xoreynta Hiiraan ayuu sheegey iney ka foojignaadaan goobahii ay ka baxeen argagixisada maadaama ay shacabka iyo dadka Soomaaliyeed xeelad kasta ula dagaalaan si looga bad baado qaraxyo iyo iney shacabka iyo ciidamada si sahlan u soo dhax galaan oo ay isku qarxiyaan.
Wasiirka ayaa bulshada Hiiraan ugu hambalyeeyey guusha ay gaareen sanadka cusubna u rajeyey inuu noqon doono sanadkii ay bulshada Somaliyeed ka bixi lahaayen colaada iyo dhibaatada uuna noqon doono sanadkii nabada iyo horumarka maadama dalka iyo dadka Soomaaliyeed loo rajeynayo iney ka dhalato dowlad rasmi ah oo uu wadanku ka bixi doono xiliga kumeel gaarka.
· admin on December 31 2011 13:52:56 · 0 Comments · 1618 Reads ·
14,612,224 unique visits